Free DeMIX Pro Fitsarana 7 andro | AudioSourceRE
Andramo DeMIX Pro maimaim-poana ho an'ny andro 7
Fanandramana ho anao ny STEM tsara kalitao tsara atolotry ny rindrambaiko fisarahana feo tsara indrindra eny an-tsena, na eo aza ny feo, ny feo rehetra ao anatin'izany ny feo miampy feo, bass ary ny fisarahana amin'ny amponga miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny DeMIX Pro.
Afaka mividy ianao izao DeMIX Pro amin'ny isam-bolana na isan-taona na tompony mivantana miaraka amin'ny fahazoan-dàlana maharitra. Manolotra fanandramana maimaimpoana 7 andro feno tsy misy tadiny izahay ary tsy misy fameperana rindrambaiko manokana mampiasa ny rohy fisoratana anarana isam-bolana amin'ity pejy ity. Manome anao fotoana hizaha ny rindrambaiko tsy misy fetrany izany.
Raha faly amin'ny valiny ianao, ny drafitra nofidinao dia hanomboka hiasa amin'ny andro faha-8 ary hanavao ny tsingerintaona isam-bolana aorian'izany.
Raha manana fanontaniana mialoha ny varotra ianao dia azonao atao izany mifanerasera, ary raha te hijery ny anay ianao fizarana fanohanana ho an'ny fanontaniana iraisana, na fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny fomba fametrahana fangatahana fanampiana.